> Resource > Transfer > Sida loo saar Baararka Black aan Bahdilka Quality
Ma doonaysaa in aad ka saarto qataarrada madow oo aad ku dhibin marka aad daawashada filim on your PC ama TV? Kuwani waxay ku mashquuliyo baararka madow ka muuqan karaan labada dhinac, ama ay weheliyaan sare iyo hoose ee video ah. Waxay muujinaysaa in saamiga dhinac ee video ma haboon tahay screen daawashada ka. Hadda uun iyaga si fudud oo aan khasaaro tayo kasta oo isticmaalaya saarto Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Hel maxkamad free hoos ku qoran.
Fiiro Gaar ah : Tani Faydi bar madow waxaa laga heli karaa labada Windows iyo Mac madal. Hoos hage qaadataa scrennshot Windows si ay u sharxaan sida ay u shaqayso. Haddii aad tahay qof user Mac ah, oo kaliya la qaato Wondershare Video Editor for Mac si isku mid ah loo gaaro.
Guji "Import" in ay ku shuban files warbaahinta ka wadid aad u adag ama kamaradaha digital. Ku dhowaad dhammaan qaabab SD iyo HD waxaa taageera, oo ay ku jiraan wmv, MOV, AVCHD (MTS, M2TS), DV, Mpg, MP4, iyo in ka badan. Marka aad ku darto oo dhan oo iyaga ka mid ah, waxay ku tusi doonaa in Library Media sida thumbnails. Jiid iyo iyaga iska Timeline Video ah, ka dibna riix icon play ah si aan u daawado oo ku saabsan suuqa kala xaq previewing ah.
2 baararka madow saar
Midig u guji video in uu leeyahay bar madow dhinacyadiisa sare iyo hoose ama labadaba, dooro "Dalag" si ay u helaan suuqa kala dalagga. Halkan, waxaad gacanta hagaajin karo size jir ah, ama sax ah "16: 9" (screen ballaaran) ama "4: 3" (standard) ikhtiyaarka in la baabi'iyo qataarrada madow. Tan waxaa dhejisaa-waqtiga dhabta ah previewing uu furmo suuqa, waxaad ka xukumi kartaa saamiga dhinaca saxda ah ee aad PC ama TV shaashad fudayd.
Talooyin: sidoo kale waxaa laga yaabaa in aad xiiseyneyso in la qabsado ee dhalaalka , ka duwan, ciyaaro xawaaraha , mugga audio si aad u hesho image fiican iyo waxqabadka. Haddii loo baahdo, fadlan u helaan suuqa kala Edit by double gujinaya file si uu u kasbado in ka badan.
3 Save the video qataarrada madow oo aan
Guji "Dhoofinta" inuu ku soo bilowdo ka saareen baararka madow. Daaqadda pop-up wax soo saarka, badbaadin abuurkiinna sida qaabka video asalka ama doorato noocyo kala duwan oo qaab doorasho ah ee loo maqli haboon.
Sidoo kale, waxaad dooran kartaa horena gaar ah qalab Raaxo screen-buuxa ku go ka. Oo xataa waxa gubanaya si DVD video for loo maqli karo ciyaaryahanka DVD standalone ama HDTV widescreen. ( Talooyin : Waxaad sii hagaajin karo goobaha horumar video qeexitaanka sare sida 1080p, ama 720p sida aad u baahan tahay.)
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) dhoofin karaan oo keliya mid ka mid file waqti. Sidaas darteed haddii aad rabto in aad ka saarto baararka madow ka files kala duwan iyaga oo aan wada biirtay, waxaad badbaadin kartaa file mashruuca rogtid oo aad computer mid mid. The kordhin file default waa .wve. Ka dib markii in, iyaga mar kale ku shuban si ay u abuuraan files baararka madow oo aan mid kale ka dib.